Kedu ndị na - enyocha obi na - arụ ọrụ na strava? - Nri
Isi > Nri > Strava heart rate nyochaa - azịza ohuru
Kedu ndị na - enyocha obi na - arụ ọrụ na strava?
Nribudakọtaranwere ọtụtụ ngwaọrụ GPS na-edekọobi obidata, gụnyere Garmin, Fitbit, Apple Watch, Wahoo, Polar, na Suunto, na TomTom.17 2021.
Taa, anyị na-ahụ ọgbụgba egbe Wahoo nke abụọ nke eriri obi Tickr na Tickr X. Na 2014, Wahoo bu otu n’ime ndi izizi iwebata uzo abuo abuo Ant + na ntule obi nke Bluetooth, dakọtara n’ihe ọ bụla m jikọtara. 2014-2020 bụ ogologo oge na afọ teknụzụ Ya mere, gịnị agbanweela na Ọgbọ 2? Ihe nlele mbu nke obi obi na eriri obi bu nsogbu edozi.
Emere ya ọtụtụ, ọtụtụ afọ gara aga. Ogologo oge tupu Wahoo gosipụtara. Ya mere, ọ dịghị ihe gbanwere na nke ahụ.
Nsogbu ndị dị na eriri afọ obi na-adịkarị ogologo oge ma ugbu a ọ dị mkpa maka inwekwu njikọta. Gaa na mmelite maka Ọgbọ 2 ọ dị ka ụdị nke ochie. Emegharila pọd ahụ naanị ntakịrị, mana karịa n'azụ, eriri ahụ na-eme ka ọ dịkwuo ụtọ ma ọ bụ tụọ ọfụma n'ime ite n'onwe ya.
Yabụ ọ bụrụ na ị pịa ya n'ime pịa ya n'ahụ gị, ọ ga-adị mma karịa. Onwe m, enwebeghị mgbe m nwere nsogbu ọ bụla na eriri obi ma maka mmadụ ole na ole, nke a ga-abụ mgbanwe nnabata. Ikanam ọnọdụ ọkụ ugbu a n'elu nke obi ọnụego ileba anya na agaghịkwa n'ihu.
Ya mere, mgbe ị na clip gị obi ọnụego ileba anya, anya na ọnọdụ ọkụ ị na-adịkwaghị ga tụgharịa ya iji gosi ọnọdụ nke ngwaọrụ. Nwere ike ile anya n’aka nri ya, ọ ga na-atachi kwa azụ. N'ihe gbasara njikọta, enwere Ant + na ugbu a (3) njikọ Bluetooth na akụrụ na ticker x.
Gịnị kpatara atọ? Ọfọn, ọ na-edozi nsogbu maka Wahoo na usoro okike ha. Ọ bụrụ na ị nweela isi mkpuchi, ngwa ọzụzụ dị ka Zwift ma ọ bụ Sufferfest na ị na-agba ọsọ n'otu (nkeji atọ) n'otu oge, ịnwere ike ijikọ na nlele obi gị site na Bluetooth. Akọrọ na-acha ọcha na. Stealth Black dị.
Togabiga na Tickr X Gen 2. Otu mmelite nke anụ ahụ maka ya. Ya mere, ntakịrị iwepụ na azụ ya na njikọta na eriri.
E meziwanye nchekwa dị na mmiri site na 16 awa ruo awa 50. Edere ụfọdụ metrik na-agba ọsọ. Mgbe ị na-eji ngwaọrụ a maka ọsọ, ọ ga-edekọ ụfọdụ usoro metrik ndị ọzọ nwere ike ịlele site na ngwa Wahoo na maka ịgba ịnyịnya n'ime ụlọ.
Ọ na-enye gị atụmatụ cadence na accelerometers. Ezigbo ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị na-eji Apple TV (ị nwere mmachi na njikọ ngwaọrụ abụọ a) ma ọ bụrụ na ị na-eji onye nkụzi katarala ikike na-enweghị isi, naanị nhọrọ bụ iji jikọọ site na eriri obi ma ọ bụ ihe mmetụta nzuzo. Ogosi Ticker X nwere ike rụọ ọrụ dị ka ihe nyocha obi na ihe mmetụta nke cadence.
Ka anyị lee ya anya. Ọ dị mma, lee, anyị nwere Zwift na igwe onyonyo Apple ma anyị abanyela ugbua site na igwe Kickr. Anyị na-atụgharị na ọnụego obi wee họrọ Tickr XA dị ka isi mmalite maka ọnụọgụ obi.
Nke ahụ nwere obi ụtọ. Ruo na cadence. Ugbu a, Kickr igwe kwụ otu ebe nwere ihe nzuzo, mana ị nwere ike ịhụ ebe a ka egosipụtara Tickr X dị ka isi mmalite na ozugbo ahọrọ ma anyị bido pedal, Apple TV anaghị agbanye njedebe nke njikọta ngwaọrụ.
Ya mere, Kickr igwe kwụ otu ebe bụ otu njikọ na Tickr X bụ njikọ nke ọzọ mana ọ na-enye anyị ọnụego obi na cadence ma ị nwere ike ịhụ na m na-abawanye ma na-ebelata ikike m ma ọ na-anabata nke ọma. Yabụ na ọ bụghị ihe zuru oke, mana ọ bụ azịza ma ọ bụrụ na ịchọrọ ime ka ihe dị mfe ma nwee njikọ kpọmkwem maka Apple TV. Yabụ Tickr X nwere ike idozi nsogbu ebe a.
Ndụ batrị e zoro aka na: Tickr dị ihe ruru awa 500 na Tickr X na ndị accelerometers na-arụ ọrụ ntakịrị ntakịrị oge niile. N'ihi ya, ọ nọwo na-eji ihe karịrị 200 awa. Otu di na nwunye: ihe ndị Tickr na-agba ọsọ na Tickr Fit optical eriri ka dị maka ndị na-enweghị mmasị eriri ticker x, nke na-agbanweghi agbanwe Ya mere, lee nkọwa niile gbasara ọkwa taa nke Wahoo ọhụrụ Tickr Gen 2.
Ugbu a, ha na-eme otu mgbakọ aha dị ka na Kickr. Ihe mbu bu Kickr, nke ozo bu Kickr. Versiondị na-esote bụ Kickr na ọzọ kicker.
Anyị ga-enye ha aha aha, ya mere Kickr 14, 16, 17 na 18. Otu ebe a na eriri obi obi. A na-akpọ ha Tickr, mana ha bụ Ọgbọ 2.
M na-anwale Ọgbọ 2 Tickrs maka ọnwa isii gara aga, yabụ ọ bụ mmalite nke mmalite ngwaahịa a. Site na data m jiri maka llama lab na ime ụlọ na ndekọ data dị na mpụga, enweghị nsogbu ịkọwa ebe ahụ. Ihe niile dị na firmwares kachasị ọhụrụ.
Nkasi obi na odidi abughi nsogbu m, mana enweghi m nsogbu obula na eriri obi, ma oburu na i mee, uzo mgbaaka ozo di. Nke ahụ bụ Tickr Fit nke ka na-ere ere. Ya mere, anyị bụ, ngwaahịa ọhụrụ sitere na Wahoo taa, ụbọchị ọmarịcha.
Ọ dị mma. Daalụ maka ikiri
Kedu ka m ga-esi jikọta ileba anya nke obi m na strava?
Nyochaa obimelite -Nri(Gam akporo)
Fanye SoundSportPịaekweisi na ntị gị.
MepeeNgwa dị egwu.
Banye nangwama ọ bụ mepụta akaụntụ.
Kpatụ nri na elu, akụkụ aka ekpe nke ihuenyo, wee họrọ 'Dekọọ Ọrụ'
Nriga-amalite na-akpaghị akaobi obisensọ.
(Ọnụ ụzọ meghere ma mechie) - Morning Trainiacs. Anyị nwere ọtụtụ ọrụ ime. Oge nkuzi mkpirikpi dị mkpirikpi mana ọ na-atụ ụjọ.
Eeh. Eeh. Eeh Eeh.
Ya mere, ebe nke a bụ oge siri ike Zwift, ekwenyere m na e nwere ọtụtụ n'ime gị ugbu a bụ ndị, ọ bụ ezie na Zwift mere nnukwu mmụba na ọnụ ọgụgụ ndị na-agba ịnyịnya n'afọ gara aga, afọ a, o doro anya na ndị ọzọ na-abanye n'ụgbọ. Ya mere enwere otutu ajụjụ banyere otu esi edozi Zwift nke ọma. Otu n'ime ihe kachasị mkpa ndị mmadụ kwesịrị ịma bụ otu esi agbakwunye Zwift ka ọ na-akpaghị aka na Strava mgbe ọ bụla ọ bụla gasịrị.
Na akpaghị aka na-agbanye dịka Atụmatụ nke Taa, Ọzụzụ Ọzụzụ ma ọ bụ Garmin Jikọọ. Ihe ọ sọrọ ya bụrụ. Yabụ mgbe anyị lụchara ọgụ ahụ ihe dịka ọkara elekere, nke ahụ bụ ihe anyị ga-eme.
Da na-akpa ọchị. Iwu? Anyị agaba. (Joy egwu) Oh wow! Whoa, nụ!
Whoa. Yabụ, nke ahụ bụ nkeji nkeji 35, nkeji 10 na-ekpo ọkụ. Obere ihe sayensi gosiputara, oru oma kpoo.
Ma ugboro anọ nkeji atọ, n'ụzọ doro anya site na FTP. Dị ka idobe ala m ruo 300 watts, FTP m dị ebe ugbu a, ikekwe 260. Ya mere, jide ya karịa 300 maka nkeji atọ oge niile.
Zuo minit atọ na mpaghara nke abụọ, gburugburu 130 watts. Mee nke a ugboro anọ. Gbalịa ka ị ghara tufuo ọgwụgwụ.
Achọrọ m egwuregwu ọzọ, ụmụ okorobịa. Ọ dị mma. Etosiri m ịsacha eze.
Ọ bụ ezie na m ga-abịa ọzọ na-agwa gị otú ị melite Zwift. Ọ dị mma? Ka ọ dịgodị, ka m na-eme nke a, gịnị kpatara na ị gaghị eso m na Zwift. Aha mbụ bụ T.
Aha ikpeazụ bụ Riathlon Space Taren. Ọ dị mma? Yabụ, enwere ọtụtụ Zwifters ọhụrụ ebe ahụ. Ma ịtọlite ​​Zwift dị mfe ma a bịa n'ịkwọ ụgbọala.
All ndutịm ihe, dị ka ịgba ụgwọ, na njikọ na Strava, Garmin Jikọọ, Ọzụzụ Ọnụ, ọ dịghị nke na-eme n'ezie na ngwa. Ya mere ọ bụrụ na ị gaa Zwift, ị ga-enweta nkwado na ngwa ndị a niile ebe a. Ga-ajụkwa, sị: ‘Ọle ebe m ga-eme nke a? , ọbụna mgbe ahụ, gakwuru ndị enyi niile nke Zwift.
Ma mgbe ahụ ị na-asị, 'Oh. Ọ ga-abụ ebe a. Ọ ga-adị na Zwift Companion App. 'Ma nke ahụ bụ n'ezie interface ọzọ maka ngwa Zwift bụ isi.
Yabụ kedu ka esi amalite itinye mgbatị ahụ gị niile na mmemme mmemme gị niile? 'edozila ihe niile? Kwe ka m gosi gị. N’agbanyeghi ihe ibudatara na ekwentị gị, iPad gị. Achọghị ịma.
Wepụ ndị ahụ. Hapụ onwe gị na desktọọpụ gị, laptọọpụ ma ọ bụ mbadamba. Ma ihe ọ bụla ị gara m ismy dot Zwift dot com.
Nke a bụ ebe ịmalitere ijikwa ihe niile, ọ bụrụ ịgba ụgwọ ma ọ bụ ntọala maka izipu oge ọzụzụ gị niile na Zwift. Ebe a. Anyị ga-amalite na ọnọdụ apụ.
Ma ọ bụ ụdị zoro ezo ebe a, mana emesịa pụta na ala profaịlụ m. Pịa na ya ma ị ga-abanye na azụ azụ Zwift. Ọ bụrụ na ị pịa Ntọala n'elu aka ekpe ebe a, ị ga-amalite ijikwa aha gị, ngalaba ngosi gị, nwoke, nwanyị, ogo gị, adreesị ozi-e gị, otu ndị otu ị nọ.
Ebe ị chọrọ ijikọ na akaụntụ gị ndị ọzọ bụ n'ezie njikọ data sitere na Strava, Training Peaks na Garmin. Ndị a bụ ndị ukwu ndị mmadụ na-achọkarị. Ya mere, pịa n'okpuru nke ọ bụla n'ime ha.
Na mgbe nke ahụ gasịrị, ọ dị mfe ijegharị na usoro ahụ site na ntinye. Pịa Ikike. Zchọrọ ka Zwift nwee ohere ịbanye na profaịlụ gị na data ọrụ.
Eeh. Bulite ọrụ maka gị ma dezie profaịlụ gị. Eeh.
Nweta ozi gbasara onwe gị gbasara ihe ndị ị na-eme. Nye ha niile ikike. Ma mgbe ahụ, ọ bụghị nke kachasị nghọta, ị ga-enweta ihuenyo mbụ a, mana ugbu a, ejikọtara ya.
Tinyegharịa otu usoro ahụ maka Ọzụzụ Ọzụzụ Ọ ga - adị ka weebụsaịtị Training Training ma ọ bụ Strava ma ọ bụ Garmin Jikọọ n'ihi na ọ na - eziga gị na Strava, Garmin Connect, Training Peaks wee sị, 'Hey, uh, anyị nwetara arịrịọ si Zwift iji jikọọ gị akaụntụ ebe a. Nke ahụ ọ dị mma? ”Ozugbo ị banyere wee sị“ kwe, ”ọ ga-eziga gị Zwift. Ya mere, kwughachi nke ahụ maka akaụntụ niile ịchọrọ, ma na njedebe m ga-egosi gị ihe ị ga-eme mgbatị.
Ọ dị mma, yabụ ka anyị chee na ị gụchara mgbatị ahụ. Sit nọdụ n'akụkụ okporo ụzọ wee chee, 'Ọ dị mma' Ọ dị mma, gịnị ka m ga-eme ugbu a? ' Kedu ihe ị ga - eme iji kwụsị mgbe ị rụchara mgbatị a wee zigara ya na profaịlụ gị niile ka ị kwụsịrị, pịa menu, kwụsị ịkwọ ụgbọala ma ọ bụ ịgba ọsọ. Ọ ga - asị, 'N'ihi na m jikọtara akaụntụ Zwift m na Strava, Ọzụzụ Ọzụzụ na Garmin, ọ.' .
Want chọrọ izigara ya onye ọ bụla na akpaghị aka. Ugbu a ị kwesịrị ijikọ ya na Ọzụzụ Ugwu na Garmin ma ọ bụrụ na ịchọrọ iziga ya abụọ. Ọbụlagodi na ị melite Ọzụzụ Ọzụzụ iji nweta Garmin, ọ ga-ama nke ọma na mpempe ngwanrọ abụọ a maara na ịkwesighi ịmegharị mgbatị ahụ.
Ya mere ọ bụrụ n’ịchọrọ izipu gaa n’ọzụzụ abụọ na Garmin, ị gaghị ezigara ya Garmin na enweghị m eziga na ọnụ ụzọ ọzụzụ. Ikwesiri ijikọ abụọ dị ka mgbatị ndị a Zwift zigara Garmindon anaghị alaghachi azụ na Ọzụzụ. Ya mere jikọọ ha abụọ na ozugbo nke ahụ mere kụrụ ịzọpụta.
Ma na ọ na-akpaghị aka uploaded niile nke ndị nyiwe. Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ mgbe ịchọrọ ịchọọ data ochie gị Zwift ma jiri aka bulite ya mgbe ị tufuru nke ahụ? Anyị ga-abanye na nke ahụ n'otu oge. Ya mere, ka anyị kwuo na ị mechara ọrụ, yana maka ihe kpatara ya, ọ dara na nke ọ bụla n'ime usoro ndị ahụ ịchọrọ iji nyochaa mgbatị gị, ma ọ bụ ma eleghị anya enwere mgbatị ole na ole ị mere ma mee tupu nke ahụ ịchọrọ ka bulite ma bulite.
Anọ m na ọnyà na Zwift na anaghị m ada. Nke a bụ otu ị ga-esi nweta mgbatị ndị a ma bulite ha. Dịka tupu anyị agagharị na isi ihe m Zwift point com.
Ọ dị mma mgbe ị rutere na Zwift Point com ị na-anọ na ibe a, gaa na faịlụ ịchọrọ bulite nyiwe ndị ọzọ, pịa nbudata, nke ahụ ga-ebudata faịlụ dabara nke mgbatị ahụ, mgbe ahụ ị ga-aga na nke ọ bụla n'ime nyiwe n'otu n'otu, gaa Strava dot com wee rute na dashboard ebe a. Hover n'elu tinye akara n'elu nri. Pịa Bulite Ọrụ.
Pịa Njikwa. Họrọ faịlụ ma gaa faịlụ kwesịrị ekwesị wee pịa Mepee. Agaghị m eme nke a n'ihi na ọ bụ oyiri bụ, mana nke ahụ bụ ihe ị na-emere Strava.
Na Ọzụzụ Ọzụzụ, ị na-aga ntụpọ Ọzụzụ ọnụ ọnụ ngwa ntụpọ com, ọ ga-akpọrọ gị laa. Ga-achọzi kalenda ịga. Eeh.
Pịa Bulite. Mee otu ihe ahụ. Bulite faịlụ ahụ.
Ọ ga-emekwa otu ihe ahụ. Ikwesiri ịchekwa ma mechie ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịchekwa ya. Maka Garmin gaa jikọọ ọnụ Garmin dot com.
Clickpịrị na obere igwe ojii a. Bubata data. Were faịlụ a.
Ma họrọ ya. Na ị pịrị na Bubata data. Nke a bụ otu ị ga - esi jiri aka gị bulite mgbatị Zwift na nyiwe ndị a niile.
Ya mere, ka anyị bido na Trainiacs Na Zwift, ndị a bụ ụfọdụ obere ihe ị ga - arụ ọrụ. Dị ka m kwuru, ọtụtụ n'ime ihe nchịkwa azụ dị na akara m na Zwift dot com. Ọ bụghị n'ezie na ngwa ahụ; ihe niile bụ n'ezie na ngwa dị ka ịkpụzi avatar gị na ịkwọ ụgbọala.
Ma ọ bụghị otu ịgba ụgwọ, ozi profaịlụ na ntọala niile na-eme na saịtị Zwift Dot Com. Yabụ, debe ya ma. mgbe ị nọ ya, gaa soro m.
Aha mbụ bụ T, aha ikpeazụ bụ Riathlon space Taren. Anyị ga-eme ka ọ buru ibu na Zwift afọ a. Ndị na-eso ma bụrụ akụkụ nke obodo Trainiac, anyị ga-eme njem ụgbọ elu Zwift.
Anyị na-eme ka Zwift sie ike yabụ gbaa mbọ hụ na esoro gị. Emechara m ịkụ aka ọtụtụ ebe. Ọ dị mma, trainiacs n'ọdịnihu.
Obi Obi Ọ Na-efu na Strava?
Ọ fọrọ obere ka ọ bụrụ ọnwa iri na atọ gara agaNriwepụrụ ikike iji sensọ Bluetooth na mpụga + dị na ngwa ekwentị ya. TaaNriekwuputala na nkwado Bluetooth maka mpụgaobi obimmesho azụ, nke kachasị mma ọ bụ oghe nye ndị debanyere aha ha ụgwọ nan'efuọrụ, kwa.
Strava achoghi mmeghe, mana m g’enye ya. Akụkụ ọrụ tracker, akụkụ mgbasa ozi mmekọrịta mmadụ na ibe, akụkụ ụzọ nhazi, akụkụ ebe nchekwa nke ọtụtụ ijeri igwe kwụ otu ebe, akụkụ ọkacha mmasị m, Oge Na-arịgo Ego, mara nke ọma na ma weebụsaịtị ma ngwa ahụ bụ n'efu, mana atụmatụ ndị ọzọ bụ enwere ya mgbe ị kwụrụ obere ndenye aha wee bụrụ onye otu Strava Summit enweworị ọtụtụ atụmatụ. N’ihi ya, Strava gwara anyị ka anyị nyere anyị aka ịkọwa ihe.
Na edemede a anyị ga - agabiga ndị kachasị ewu ewu. Ihe kachasị ewu ewu n'etiti ndị otu Summit metụtara na ndị ndu, ịtụnanya, n'ezie, ọ bụghị ya? Sitnọdụ ala na sofa na iko tii na ịlele na Strava nọ n'elu bụ otu n'ime ihe omume kachasị elu na-eduga na bọọdụ isi bụ otu n'ime ihe ndị riri m ahụ. Ma enwere oge, ma eleghị anya n'ezie? ngalaba ndị ama ama ebe ịchọrọ ịmara n'ezie otu ị si emetụta njem ndị yiri ya, ikekwe afọ ma ọ bụ ibu.
Na Sumva Summit, ị nwere ike ime nke ahụ. Na isi ndu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị cheta otu edemede, n'oge na-adịghị anya gara aga, agbalịrị m ịmegharia KOMby site na itinye ego n'ime nsogbu ahụ ma wulite igwe kachasị ọsọ m nwere ike.
Ọ bụrụ na m gaa na isi nzacha ugbu a, m ga-enweta okpueze. Ee! N’agbanyeghi na ndi ewu ewu, ndi isi edere abughi ihe ndi bara uru n’ile m anya. Kama nke ahụ, echere m na ọ bụ ikike Strava Summit nwere ike inyere gị aka inyocha ịnya ụgbọ gị site na ọzụzụ ọzụzụ na nyocha nke obi, yana mmụba nke wearable na ị nwere ike ịmekọrịta na isi isi ma ọ bụ ngwa ndị ọzọ, yana mgbe ịdekọrịrị obi gị, na Strava Summit mgbe ị na-agba ịnyịnya, ị ga - ahụ ogologo oge ị nọrọ na mpaghara obi dị iche iche.
Ugbu a ịmara na ụdị dị iche iche bụ isi ihe ga - eme ka ị nwee ihe ịga nke ọma, ị ga - ahụ na nlele ma ị na - emechi igbe ndị dị gị na mgbatị gị, ma ị na-arapara ọtụtụ kilomita. Ya mere, ị na-eje ije dị oke egwu ma dịkwa mfe zuru oke, ka ị nọ naanị ebe? n'etiti? Ọ bụrụ na ị nwekwara mita ike, Strava na-enyekwa gị mmebi yiri nke ahụ, mana na-akọwa watts ka ọ na-emegide iti kwa nkeji. Strava nwere ike iji ọnụọgụ obi gị nye ọnụ ọgụgụ a maara dị ka mbọ metụtara gị, nke bụ n'ụzọ bụ isi otu etu ọzụzụ gị ma ọ bụ ịnya ụgbọ si sie ike.
Ọ bụrụ na ị maara ihe ochie Strava Leiden Score mgbe ahụ, ọ bụ mmalite bụ mmalite ya. Ma ọ bụ ọnụọgụ nke ọnụọgụ nke ọrụ obi obi nke etinyegoro n'otu ọrụ, nyefee ya na ọzụzụ niile, yana akụkụ metụtara ya, gụnyere eziokwu ahụ bụ na ọ bụ naanị gị, yabụ na ọ naghị echebara ngwa ngwa gị gara mana otu ị siri gbasie mbọ ike. Ihe ọ pụtara bụ na ị nwere ike ịkọwapụta otu mmega ahụ ewepụtarala gị yana otu esi ahazi ya emeela ka ọ tụlee ọtụtụ puku ọrụ dị iche iche.
Strava na-ekwu na ha nwere ike ịmegharị algorithm iji rụọ ọrụ maka mkpụmkpụ, mgbatị siri ike na ogologo, na-arụsi ọrụ ike, ị nwere ike ịhụ na etinyere ya n'ime izu ole na ole sochirinụ ma hụ otu o si arụ ọrụ n'izu nyere n'ezie ewepụrịrị na usoro nke mgbalị ọ na-ewe n'aka gị. Ngalaba ndụ dị ndụ. Nke a dị mma ugbu a.
Ọ na-arụ ọrụ na ngwa ekwentị, ọ bụ ezie na amaara m na ụfọdụ n'ime gị na ekwentị gị na-agba ịnyịnya na njikwa gị, ihe m chere bụ ụzọ nke masịrị ọtụtụ n'ime anyị ka ọ na-abanye n'ime isi GPS isi. Ihu ọma, ị ga-amalite otu mgbe ị na-eme nke a, nkọwa na-akpaghị aka na ngwaọrụ gị, nke pụtara na mgbe ị na-eru ya nso na ndụ n'ezie, gị na ihuenyo ga-agbanwe na kama nke gị nkịtị data, nke nke ga-apụta . Ọ na-egosi oge gị dị ugbu a na ya, oge njedebe gị buru amụma yana kwa ugbu a t enweghị atụ nke kachasị mma nke onwe gị, nke kachasị mma nke onye ị na-eso, ma ọ bụ oge kachasị mma nke oge niile.
Ọ bụ ngwa ijegharị dị egwu, ọ ga - enyere gị aka ị nweta ihe kachasị mma n'onwe gị, echekwara m na ọ dị mma maka itinye obere mkpali mgbe ihe mgbu na - amalite. Nke na - esote bụ ụtụ maka mmekọrịta mmadụ na Strava ikpo okwu. Ọ gwụla ma mmadụ nwere mkpọchi nzuzo ha, otu n'ime ihe ndị mara mma banyere ya bụ na ị nwere ike ịhụ ebe ha na-anya ụgbọ.
Ga - ahụ ebe nde mmadụ na - eme njem ugbu a. Strava algọridim na-akpaghị aka na-etinye data a niile na ngalaba atụmatụ ụzọ ma na-eduzi gị n'okporo ụzọ ma ọ bụ ụzọ ụzọ kachasị ewu ewu. Ozizi a ma ama dịkwa mma, echere m.
Mana na Strava Summit ị nwere nhọrọ ọzọ na nke ahụ bụ na ị nwere ike ibudata faịlụ GPX yana ụzọ onye ọzọ masịrị gị. Ọ nwere ike ịbụ ọkachamara mpaghara, ọ nwere ike ịbụ onye na-emetụta ya, ọ nwere ike ịbụ enyi ma ọ bụ onye ọrụ ibe gị. N'okwu ya, m ga-agakwuru Dr.
Oliver Bridgewood GCN weghaara. Ya rework ụnyaahụ. Ugbu a ịkwesịrị ịmepe nsụgharị desktọọpụ, ọ bụghị ngwa ahụ.
Mana ị ga-ahụ mgbe ịpịrị Ọrụ, enwere obere akara ngosi GPX na akuku ihuenyo, yabụ ka anyị kụọ ya, budata faịlụ ahụ, wee bulite ya na ngwaọrụ ị họọrọ. Mgbe ị na-anya naanị ya ọ dịla mkpa ka mmadụ mata ebe ha nọ mgbe ị na-apụ ma ugbu a teknụzụ na-enye ya ohere, ime ka ha mata na ị dị ndụ bụ nnukwu echiche. Ihe a ka m na-eme oge ọbụla m na-anya ụgbọala n’ụbọchị ndị a.
Enwere nhọrọ dị iche iche maka nke a, mana Strava Summit nwere nke edobere maka ndị ịgba ịnyịnya ígwè na ndị ọgba ọsọ. A na-akpọ ya mgbama. Ihu ọma oge ọ bụla ịdekọ ọrụ, ma na ngwa ahụ, na Garmin ma ọ bụ na Apple Watch, ị nwere nhọrọ iji zipu ozi ruo na kọntaktị atọ.
Ugbu a ị ga-enweta ederede a, nke nwere njikọ maka ọrụ gị. Can nwere ike ịlele ya ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịnweghị profaịlụ Strava gị. Dị mfe, mana enwerekwa atụmatụ ndị ọzọ, dị ka igosipụta ndụ batrị gị na n'ezie oge ikpeazụ ị nwere mkpọtụ ekwentị iji hụ ma ị nọ ebe ahụ.
Nzukọ ikpeazụ nke oge niile Tinye na nke a ịdị mma na ịdị ọcha. Ya mere ọ bụrụ na ị na-eji obi ọnụego nyochaa otú Strava nwere ike gbakọọ gị ikwu mgbalị, na kwesịrị ma ọ bụrụ na ị na-eji a ike mita ya mere o nwere ike gbakọọ ihe omumu ibu, nke a nwere ike mgbe ahụ see a eserese nke gị udi ihe karịrị oge. Ugbu a, a na-agbakọ ahụ ike site na iji algọridim mpaghara Strava dabere na ọrụ gosipụtara site n'aka Erik Banister na Andy Cogan.
Ahụ ike ị nwere ike ịhụ na-anọgide na-adịgide adịgide karịa oge, nke yiri nke ahụ, n'ezie ụdị ike ọgwụgwụ gị na nke ahụ na-anabata. Can nwere ike ịhụ na ọ na - ebido na - ebugharị mgbe ụbọchị ole na ole siri ike, mana ọ ga - alaghachi ngwa ngwa mgbe ịmalitere ịdalata, ọ bụkwa ụzọ dị mma iji hụ ike gwụrụ gị mgbe ị rụchara mgbatị ahụ ị mere. Mgbe ị jikọtara ha abụọ, ị ga-enweta akara squiggly ahụ n'elu nke bụ ọdịdị gị.
O doro anya na ọ baghị uru ịba uru, ị na-agwụla ike, yabụ ụdị gị na-egosi gị mgbe ị nwere nguzo ziri ezi, ma eleghị anya na ọsọ ọsọ maka ihe omume, n'ihi na ọ bụrụ na ị dị ọhụrụ, ị ga-amalite ida ahụ ike Iji mee ka atụmatụ ahụ dị mkpirikpi belata. Ọbụghị naanị na nke a bara uru maka ndị dị ka m, ndị na-akwọ ụgbọala n'otu aka ahụ n'oge niile, mana ọ na-enyekwa gị ntụzi aka ma ị kwesịrị ịgbanwe ihe. Yabụ ndị a bụ ọrụ Summit gị kachasị mkpa.
Enwere ọtụtụ ihe, dị ka okpomoku nke ahaziri iche, nke mara ezigbo mma ma nye gị nyocha ebe na ugboro ole ị nọrọ na Strava, yana atụmatụ ọzụzụ na n'ezie usoro arụmọrụ gị. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale ya n'onwe gị Strava ji obi ọma na-enye onye ọ bụla nnwale ọnwụnwa 30 n'efu na-aga ebe ahụ ka isiokwu a gasịrị. Njikọ nke a dị na nkọwa dị n'okpuru.
Ugbu a, ka ọ dị ugbu a, ọ bụrụ na ịchọrọ ka m gbanwee wee gbalịa weghachite COM mgbe ahụ ị nwere ike iru isiokwu a ebe ahụ. Ma ọ bụghị ya, nye onye a nnukwu mkpịsị aka aka.
Strava ngwa ọ na-edekọ ọnụego obi?
Strava ga-gaa n'ihundekọ ọnụego obisite na ihe mmetụta dị na Apple Watch, Samsung Galaxy / Gear naGam akporoWearOSngwa. Omume ọ bụla nke gụnyere data ihe mmetụta ndị dị na yaedereiji ngwaọrụ nke atọ ma ọ bụngwana syncs naStrava ga-bulite dị ka nkịtị.
Mgbe ị na-agba ọsọ na ọnụọgụ obi dị iche iche, ha na-emetụta ibe ha metụtara physiology gị n'ụzọ dị iche iche. Zụọ usoro dị iche iche wee gbanwee ụdị ọzụzụ ị na-achọ.
Mara mpaghara mpaghara ma ọ bụ mpaghara ị na-emega ahụ nwere ike inyere gị aka ịbawanye uru nke mgbatị gị ma ọ bụ mgbake gị. Mmetụta obi dị iche iche na-ezu ike na mgbe a na-emega ahụ, yana mpaghara obi dị iche iche dịgasị iche iche site na mmadụ na mmadụ, ọ dabere na ọtụtụ ihe dị iche iche agakọtara, gụnyere afọ, ibu, okike, ogo ahụike, ogo, na ọbụlagodi ihe ndị dịka ọgwụ ma ọ bụ nrụgide. Ọ bụkarị gbasara obi izu ike gị na ihe kpatara o ji dị mkpa ilebanye anya na ya.
I nwere ike chọpụta na ụda obi gị na-agbanwe kwa ụbọchị na ọsọ ọ na-agba Otu ụbọchị, ije ije nwere ike ịdị gị nfe nwere ike ịka njọ karịa ụbọchị ọzọ. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi ọtụtụ ihe dị iche iche. Ma eleghị anya, ị rahụghị ụra nke ọma n'abalị ahụ, ị ​​nwere ike ịhapụ ntakịrị ma chee obere ihe nhụjuanya na nrụgide nwekwara ike e Kedu nke kpatara na ọ bara ezigbo uru ileba anya na obi gị mgbe ị na-agba ọsọ ndị a niile mgbanwe dị iche iche ị nwere ike ịnweghị.
Ugbu a achọpụtara ya mgbe ọ dị maka ịtụ obi gị mgbe ị na-agba ọsọ, enwere ụzọ abụọ dị mkpa: nke mbụ bụ ihe mmetụta ngwa anya na nkwojiaka gị, yabụ na Garmin ị ga-ahụ ọkụ na-enwu gbaa na ala nke na-anọdụ na nkwojiaka gị na ọkụ nke ntụgharị dịgasị iche iche na-agbaji site na mmegharị nke ọbara n'okpuru akpụkpọ gị na ngwaọrụ gị wee kọwaa nke a n'ime data ọnụọgụ obi iji nye gị ọtụtụ iti kwa nkeji, ma ọ bụ bpm. Nhọrọ nke abụọ bụ eriri obi nke a na-eyi n'akụkụ anụ ahụ n'okpuru uwe ị na-eyi. Ha na-atụ etu obi gị si dị iche n’ụzọ ọzọ site na iji ihe akpọrọ electrocardiography, nke bụ ụzọ dị mfe nke a ga-esi tụọ obi gị n’ụlọ ọgwụ ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ nhọrọ.
Ọ araparawo n'ahụ gị ka a transmitter dị n'ihu na data na ọ nakọtara na-eziga ka elekere ma ọ bụ ekwentị gị. Yabụ ọ bụrụ na ị yikwasị eriri akpati yana elekere, elekere ga-ewere data sitere na mgbaaka na-akpaghị aka site na njiri aka nkwekọrịta ị họọrọ. O yikarịrị ka ọ ga-adị mfe iyi elekere, yabụ na izi ezi nwere ike bụrụ ihe metụtara ya, ya na teknụzụ kachasị ọhụrụ na ihe nyocha anya na algọridim mara mma Ọ pụtara na nlekota dabere n'ihe egwu nwere ike zuru oke, mana n'ọnọdụ ụfọdụ enwere ike imetụta njirimara onye ọrụ, dabara adaba, ma ọ bụ ụdị ọrụ maka oke izi ezi, yabụ gbaa mbọ hụ na ị na - eme ka ihe mmetụta gị dị ọcha mgbe niile yana na ị nwere ezigbo mgbatị na nkwojiaka gị.
Mara na ihe dị ka egbugbu na ụcha akpụkpọ nwere ike imetụta izi ezi nke ọgụgụ. Ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu kachasị elu na-eji eriri obi iji hụ na data kachasị ziri ezi na nke kwekọrịtara na ha kwesịrị iji dabara adaba, nọrọ ebe ha chọrọ mmiri iji bulie akara eletriki, ọsụsọ ozugbo ị na-akwagharị, ma ọ bụ obere mmiri ma ọ bụ mmiri n'ihu gị bido. Mpaghara obi bụ ụzọ iji tụọ mmetụta ọzụzụ ị ga-enweta site na ọsọ gị, yabụ ụfọdụ ndị na-eji usoro mpaghara mpaghara atọ ma ọ nweghị ihe kpatara na ị nweghị ike iji ọtụtụ mpaghara anyị na-agabiga taa bụ mpaghara ise ị ga-achọta kachasị ma bụrụkwa ndị a na-ejikarị na nche Allgarmin Nke a bụ ebe ị ga-azụ ọzụzụ siri ike, anyị ga-agwa gị ihe mpaghara ọ bụla pụtara, mana nke mbụ anyị ga-agwa gị otu ịzụ gị mgbatị.
E nwere ọtụtụ nhọrọ dị iche iche mana ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ha niile chọrọ ka ị mara oke obi obi gị ma ọ bụ imega ahụ bụzi ụzọ kachasị mfe ma dị mfe ịme ya bụ site na iji ihe akpọrọ Fox Formula ebe ị were nọmba 220 na nke gị N'ezie, nke a bụ oge izizi kachasị nke ugbu a, n'ezie, ebe nke a abụghị n'ezie usoro kachasị dị ka ihe nwere ike ịbụ eziokwu nke otu afọ 30, dịka ọmụmaatụ, nwere ike ọ gaghị emetụta onye ọzọ, ọkachasị mgbe ị na-atụle ihe dị ka ịdị elu nwoke na nwanyị na ahụike zuru oke. Iji maa atụ, enwere usoro abụọ ndị ọzọ nwere ike ị ga - eji dị ka ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ị na - achọ ụzọ dị oke ọsọ iji nweta ọnụ ọgụgụ ahụ, mana ịchọrọ ịchọta ọnụ ọgụgụ ziri ezi maka oke obi gị dịka nke ahụ obi iji meziwanye ọsọ gị, ịkwesịrị ịtụle ihe a na-akpọ nnwale nrụgide n'ihi na ị ga-anwa ịbịaru oke obi gị nso karịa ka o kwere mee. Ikwesighi ma ghara igbali nke a ma oburu na inwere oria ma obu mmerụ ahụ Ọ bụrụ na ị na-eyi uwe elekere gị ma ọ bụ ụda obi gị maka oge siri ike, ịnwere ike ịchekwa onwe gị ihe mgbu nke ịnwale ule nrụgide wee nweta nke kachasị elu ọnụ ọgụgụ obi na-agụ site na nnọkọ ahụ n'ihi na ohere dị gị nso nke ukwuu na nso nso obi gị kacha elu, mana anyị ga-egosi gị otu esi anwale ule nrụgide Nwere ike iduga mgbe ị dị njikere, ka ị nwee ike ịme ọkụ dị mfe na mbụ ruo mgbe ị rutere ịrụ ọrụ kachasị na 10-10 nkeji nkeji 12 nke mgbalị siri ike, yabụ nke a nwere ike ịbụ ngụkọta 3km na ọsọ ọsọ, ọ nwere ike ịbụ 800 mita ugboro abụọ, ma ọ bụ ọ nwere ike ịbụ abụọ abụọ na atọ nkeji oge nke mgbali siri ike.
Ọ nwere ike ịmalite ihe dị ka nkeji ise site na ala nke ogologo mkpọda ogologo, jiri nwayọ na-abawanye ọsọ na-agbada n'okpuru, wee jiri ụkwụ na-agbada n'ụzọ zuru oke maka nkeji abụọ iji nyere gị aka inweta oke obi gị. Ọ ga - ekwe omume ịhazi mpaghara ise niile nwere ọnụ ọgụgụ ahụ dịka pasent nke oke obi gị, mana enwere otu ihe anyị ga - atụ aro ka ị hazie mpaghara gị ọbụlagodi ma nke ahụ na - ewe obi gị izu ike, ebe ahụ bụ ụzọ ole na ole ị ga - esi mee nke a site na iyi elekere gị ụbọchị ole ma ole ma nwee usoro dị mma nke a. nweta obi izu ike zuru ike site na nke a ma ọ bụ na ị nwere ike ịlele ihe mbụ obi gị na ụtụtụ ma jiri uru a.
Ugbu a na ị nwere oke nke onwe gị na izu ike obi gị, ị nwere ike gbakọọ ọnọdụ obi gị, nke bụ ihe dị iche n'etiti ha abụọ, nke a bụ mpaghara obi gị bara uru iji zụọ gị, ị nwere ike zụọ mpaghara gị otu m aga m azụ gị Aga m egosi, yana Garmin Jikọọ ihe niile ị ga - eme bụ ịhọrọ HRR na ndepụta ndọpụta wee banye ụkpụrụ max na izu ike gị ka mpaghara 1 dị n'etiti 50 na 60 pasent nke obi gị ego ma ọ bụ ị nwere ike gbakọọ ndoputa gị site na iji iwepụ Obi gị zuru ike karịa nke kachasị, wee gbakọọ pasent iri ise na iri isii nke ọnụọgụ ahụ. Tinye nọmba ndị a na obi izu ike gị iji nweta obi ala na nke elu maka mpaghara otu. Nwere ike ịmeghachi nke a maka mpaghara ndị ọzọ na pasent iri isii na iri asaa maka mpaghara pasent iri asaa na asatọ maka mpaghara nkeji iri asatọ na iri itoolu maka mpaghara iri itoolu na anọ na narị ọbara ọbara ise maka mpaghara nke ikpe-azụ ma ọ bụrụ na ị nwere mmasị n'ezie inweta ọgụgụ ziri ezi nke obi gị ọnụego mpaghara enwere ike, mgbe ahụ ọ ga-ekwe omume ịga ụlọ nyocha ma mee nyocha ndị a site na pimpric ọkachamara na ntị gị iji tụọ ọkwa lactate na ya, yana tụọ oxygen gị site na mkpuchi dị ka m na-ekwu na ọ ga-ekwe omume mee nke a n'ime ụlọ nyocha, mana ị ga-akwụ ụgwọ maka ihe ùgwù ahụ, yabụ ugbu a ị setịpụrụ mpaghara gị, nke a bụ ọsọ ọsọ nke ihe mpaghara ọ bụla pụtara.
Yabụ ọ bụrụ na ịnweghị ule Alab, naanị nyochaa obi gị kachasị na ule Astress, ma ọ bụ ma eleghị anya ị jiri otu n'ime usoro ndị ahụ site na mbụ n'isiokwu ahụ, wee nwaa ya ma jiri ihe atụ anyị maka mpaghara ọ bụla. nke ịchọpụta mbọ ị ga-enwe ike ikwu na etu iku ume gị siri sie ike, otu ị ga - esi chọọ ịgbanwe mpaghara gị ka ị na - aga Mpaghara Otu bụ mgbali dị mfe ka ọ wee nwee ahụ iru ala yana iku ume gị ga - adị mfe. Inwe mkparịta ụka na mbọ ị na-agba dị obere Mpaghara abụọ dị mfe ịga ije nke ekwesiri iji gbakee na mgbake gị ma ọ bụ mgbe ị na-ekpo ọkụ ma ọ bụ na-ajụ oyi ị ga-enwerịrị ike inwe mkparịta ụka zuru oke - ọ ga-adị ka mmadụ anọ ma ọ bụ ise Mpaghara Mkpagbu Iri nke Atọ bụ ihe na-eme ka ikuku na-agba ọsọ nke ị nwere ike ịbanye n'ime ogologo oge gị. naanị nwee ike iji ihe swer ajụjụ na a okwu ole na ole Mpaghara ise bụ nnọọ ike sothis bụ etiti oge na sprints gị ume bụ ihe siri ike mkparịta ụka agaghị ekwe omume. Fọrọ nke nta ka ị chee oke ike gị maka ịgba ọsọ niile ị na-eme iji nweta otu obi. Nwere ike ịtọ mkpu mkpu obi gị na Garmin iji mee ka ị mara ma nye gị nzaghachi site na mkpọtụ ma ọ bụ bingto iji mee ka ị mara mgbe ọnụọgụ obi gị karịrị ma ọ bụ daa n'okpuru ụfọdụ, nke ahụ dị mma.
Wayzọ dị mma ị nwere ike inyocha obi obi gị mgbe ị na-agba ọsọ n'emeghị anya ala ma na-ele elekere gị anya. Iji elekere gị na - enye gị ohere ịhazigharị ihuenyo gị iji mee ka ị mata mpaghara ị nọ na ya dabere na agba ka ị ghara icheta ọnụọgụ niile ugbu a anyị gwara gị na anyị nwere ọnụ ọgụgụ dị elu Yabụ lee, ọ bụrụ ị na-abịarute n'ọnụ ụzọ ma nwee ezigbo echiche banyere ụdị obi ị ga-atụ anya ya na ọnọdụ na ọnọdụ, mana ị ga-ahụ na ọ ga-adị elu nke ukwuu nwere ike bụrụ akara mmalite nke ọrịa ma ọ bụ ike ọgwụgwụ. bụrụ ezi echiche dị mma iji belata oge a na-atụ anya ya ọbụlagodi na ọ pụtara na ị na-agba ọsọ nwayọ na mgbe ị gosipụtara ma hụ onwe gị ka ị na-emegharia karịa ma ọ bụ obere mana ọ na-esiri ike ị nweta obi gị na mpaghara ị na-agbasi mbọ ike, nke a nwere ike bụrụ ihe ịrịba ama mbụ na ị nọ n'okpuru ihu igwe ma ọ bụ enwere ike ịmegharị ahụ, yabụ kacha mma kpọọ ya ụbọchị njem n'ụlọ ma zuo ike na-atụ anya na isiokwu a zara ajụjụ gị banyere obi r riri ahụ na otu o nwere ike isi nyere gị aka ịgba ọsọ, i nwere ajụjụ ọ bụla ka anyị mara na ihe n'okpuru ma ọ bụ ikekwe ị ga-amalite ile anya data data a mgbe ị mechara ọrụ gị, gwa anyị ma nwee olile anya na anyị ga-ahụ gị oge ọzọ ebe a na-agba ọsọ
Strava na - arụ ọrụ na Apple lelee ọnụọgụ obi obi?
Iji jiriApple Watch siwuru n'imeNyocha ọnụego obi, ị ghaghị inyeNriikike ịgụobi obidata n'imeapụlNgwa ahụike. Gịmeeadịghị mkpa iji mee ka Bluetooth ma ọ bụobi obisensọ naNriiPhone ngwa iji jiriobi obidata siApple Watch.01.06.2021
Gini mere strava anaghi egosiputa obi m?
Pịa akara ngosi ellipsis (ntụpọ atọ) na akuku aka nri aka nri. Pịa Dezie. Pịgharịa gaa na ntọalaZoo ụda obidata na toggle mgba ọkụ na (ọ ga-atụgharị oroma) iji mee ka.06.23.2021
Enwere m ike ijikọ igwe onyonyo Garmin na ekwentị m?
Iji jiri ọrụ nsuso atụmatụ gịnyochaa obi, a ghaghi ijikota ya site naGarmin Jikọọngwa, kama site na Bluetoothntọala gị na ama. Tinye nanyochaa obi. Site na ngwa ngwa na ekwentị gị, wụnye ma mepeeGarmin Jikọọngwa.
Strava adịchaghị mma kwesịrị ya 2020?
Nwere ike ịpịgharịa ọsịsọ n'ime afọ nke mgbatị. Nke a bụ nrọ log anyị niile chọrọ ka anyị debe, ọ mekwara gị na akpaghị aka. Ọ bụrụ n’ịsoro otu ụzọ ahụ ọsọ ọsọ karịa otu oge, nzukọ Summit na-enye gị ohere ịtụle mbọ gị n’ụzọ dị mfe. Amaghị m na atụmatụ a bụ naanịadịchaghị, ma m na-eji ya kwa ụbọchị.12/21/2020
Gini mere strava wepuru onodu obi?
Nri nwerekwuru na ijikọ ngwa ahụ na ihe mmetụta Bluetooth na ANT +bụna-eme ka ngwanrọ ahụ mebie, na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ daawepụnjirimara a na ngwụcha Ọktọba.
Strava dị mma karịa Apple Watch?
Nri: Na-agba ọsọ & Gbaa ịnyịnya Ọzụzụ
Ọ bụkwa nke nwere ike ịrụ ọrụ na-enweghị ịdabere na nke gịiPhone, na-ekwe ka ị hụ ezigbo oge data ozugboLeleeihuenyo. Anyị bụ ndị nnukwu Fans, anyị achọpụtala naNringwa na-adịkarị ezigbo mmakarịawuru na Workouts ngwa mgbe ị na-eweta gịiPhoneyana gị.
Ngwa Strava ọ dabara na nyocha etu obi dị?
Strava ka eze reintroduced obi ọnụego ileba anya pairing na ya ama ngwa n'ihi na niile ọrụ. Enwere ike ijikọ ihe mmetụta BLE + ọ bụla dakọtara ọnụ na ngwa ngwa smartphone, na-enye gị ndụ ezigbo oge nyocha data data. Njirimara a dịịrị ndị ọrụ niile, gụnyere ndị na-abụghị ndị debanyere aha.
Gịnị mere ndị mmadụ jiri Strava soro akara ahụ ha?
Ọ bụ nnukwu ngwaọrụ iji gosipụta mmelite gị ka oge na-aga ma gosipụta agbụrụ na nnukwu ihe omume na ụdị kachasị elu. Nke a na-ewu ewu Strava atụmatụ e arịọwo ndị na-eme egwuregwu na-edekọ obi obi ha maka ụdị egwuregwu niile.
Nwere ike iji Strava na elekere Fitbit?
Strava dakọtara na ọtụtụ ngwaọrụ GPS nke na-edekọ data ọnụọgụ obi, gụnyere Garmin, Fitbit, Apple Watch, Wahoo, Polar, na Suunto, na TomTom. Iji jikọọ elekere GPS ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ akwadoro: